ဒီဇင်ဘာလ 2014 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » ဒီဇင်ဘာလ
လစဉ်မော်ကွန်း: ဒီဇင်ဘာလတွင် 2014
စွမ်းအင်ချွေ၏တစ်ဦးက New လိုင်းနှင့်အတူ LED ထုတ်ကုန်များ PrimeTime Lighting Systems က KW /2ယခင်၏အမွေအနှစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
PrimeTime 2010 အတွက်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အားပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိပိုင်ရှင်များ KW /2၏တူညီသောမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အမွေနှင့်အတူသစ်ကိုထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုအလင်းရောင်ထုတ်ကုန်စွမ်းအင်ထိရောက်သည့် LED နည်းပညာကိုထည့်ပါ။ Dallas မြို့, တက္ကဆပ် - ဒီဇင်ဘာလ 29, 2014 - Glen ဟန်နှင့်သူ၏ဇနီး, စင်သီယာဟန် 2013 အတွက် PrimeTime Lighting စနစ်များဝယ်ယူနှင့်ကုမ္ပဏီမှ KW /2ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အမည်အားပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိခဲ့ရ ...
Variosystems '' Osprey လိုင်း: ဗီဒီယို Capture အကဒ်များ, မည်သူမဆို?
Variosystems ထင်နှင့်အကောင်းဆုံးစနစ်နှင့် Logistic ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု andsupport ကွန်ယက်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုမူတဲ့ခေတ်သစ်နှင့်နိုင်ငံတကာအီလက်ထရွန်းနစ်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်သော်လည်းမိမိတို့၏နှိမ့်ချစသူတို့က client များ 'ဖို့သန္နိဋ္ဌာန် 100% ကြောင်းနိုင်ငံတကာအီလက်ထရွန်းနစ်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်လိုပြသ အကောင်းဆုံးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အကြံဥာဏ်ပေးလိုအပ်ချက်များကို။ လမ်းကိုပြန် 1922 ဗိုလ်မှူးအထွေထွေအတွင်း ...
ထုတ်လွှင့် Switcher: အဆိုပါဟောငျး Switcheroo ...
(အထူးသဖြင့်တိုက်ရိုက်ဘဏ်ဍာများအတွက်) တစ်ဦးစတူဒီယို၏ဗဟိုဟာထုတ်လုပ်မှု Switcher ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာဗွီဒီယိုတစ်ခုသိုလှောင်ရုံ၏ဤညီမျှသို့ drives တွေကိုနှင့်ထိုက်တန်၏စီရင်ခြင်းကိုခံရလျှင်မူကား, ချက်ချင်းပျံ့နှံ့သို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုကိုဆိုင်းငံ့လွှတ်ပေးရန်အကြောင်းအရာအဖြစ်ပြန်လည်မွေးဖွား, တဖန်ပြန်ထွက်စေသည်။ ပစ္စည်းက 'သိုလှောင်ရုံသွားရောက်လည်ပတ်' 'ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းအပေါ်ထဲမှာစီးဆင်းကြောင့်ညာဘက်ပစ္စည်းပစ္စယတယ်ရဲ့လျှင်, နည်းပညာဆိုင်ရာ ...
TV News Alert: ၂၀၁၅ Times Square ရှိနောက်ကွယ်မှမြင်ကွင်းများနှင့်နှစ်သစ်ကူးအကြိုအဖြစ်အပျက်တိုက်ရိုက်ရုပ်သံ
နောကျ-the-scenes, တစျဦးက Times Square ၏ပေါ်ကနေက "2015" ကိန်းဂဏန်းများ၏ဆိုက်ရောက်နှင့်တပ်ဆင်ခ featuring Times Square 2015 Pre-နှစ်သစ်ကူးဧဝကိုရိုက်ကူးများ၏အကြို EVENT သည်လွှမ်းခြုံ; နှစ်သစ်ကူးရဲ့ဧဝကို Ball ကိုပရိသတ်နှင့်အလင်းရောင်; ကောင်းသော Riddance နေ့; Confetti စမ်းသပ်ခြင်း; နှင့်အခြားကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ။ pre-ဖြစ်ရပ်လွှမ်းခြုံ 169HD ကိုထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကိုဗီဒီယို, B-roll ရိုက်ကူး x featuring, download, ကနေတဆင့်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် ...
မော်စကိုရုရှား - iPi ဖျ, LLC, ယနေ့ကုမ္ပဏီရဲ့အထင်ကရဆော့ဖ်ဝဲ 2014 အတွက်အရှိန်အဟုန်, iPi Motion Capture အ, ကောင်ဘွိုင်ပွဲ FX, Big ပျင်းရိစက်ရုပ်က The အဆက်မပြတ်တူသောစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များအပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုစတူဒီယိုအကြားခိုင်မာတဲ့ဖြစ်ဆက်လက်ကြေညာခဲ့သည် Group နှင့်ဝိညာဉ်တော်မြို့မီဒီယာ။ iPi ဖျအဘို့, 2014 ကနေအထိအများအပြားက high-အချက်များနှင့်ပြည့်စုံတစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည် ...
AES67 နျ Standard ၏မွေးစားခြင်းနှင့်အတူ Riedel ယဇ်စံချိန်စံညွှန်း-Agnostic Solutions ၏ရည်မှန်းချက်နီးကပ်လာစေ့ဆျော
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အလွန်အမင်းအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများပူဇော်ရန်၎င်း၏ကတိကဝတ်များတွင် Riedel ဆက်သွယ်ရေးယနေ့၎င်း၏ထောက်ခံမှုထုတ်ပြန်ကြေညာ - ဒီဇင်ဘာ 67, 23 - AES2014 / RAVENNA ဆက်သွယ်မှုရီးရဲလ်အချိန်အိုင်ပီ-အခြေပြုပေး Audio ဖြန့်ဖြူး WUPPERTAL, ဂျာမနီထူထောင်အတွက် Customer များ '' Options ကို Extend မူမည် AES67 စံနှင့် RAVENNA နည်းပညာမူဘောင်။ လက်ရှိကွန်ယက်ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက် operating နိုင်စွမ်း, RAVENNA အသံ၏ Real-time IP ကိုဖြန့်ဖြူးနိုင်ပါတယ်နှင့် ...
Blackmagic ဒီဇိုင်း Teranex Update ကို 3.1 ကြေညာ
Teranex Express ကိုအပေါ် 12p3 မှတက်ကို Quad 2160G-SDI စကားဝိုင်းများအားလုံး Teranex အင်္ဂါရပ်များဗဟိုမှထိန်းချုပ်ပေါင်းအသစ်များကို 60G-SDI အပါအဝင် Teranex စံချိန်စံညွှန်းများ converters အဖြစ်ဘို့ဗိုလ်မှူးအသစ်က software ကို! Blackmagic ဒီဇိုင်းက၎င်း၏ Teranex 2D, 3D နှင့် Express ကို converters များအတွက်အဓိက update ကိုကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ Teranex 3.1 update ကိုဖောက်သည်ကိုအဝေးမှကို set up နဲ့ settings တွေကိုပြင်ဆင်နိုင်တယ်အသစ်တစ်ခုဆော့ဖ်ဝဲ application ကထပ်ပြောသည် ...
NewBay မီဒီယာကုန်ပစ္စည်းတီထွင်ဆန်းသစ်မှုဆုချီးမြှင့် Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့ StreamScope MT-50 HDT
Princeton, NJ - ဒီဇင်ဘာ 22, 2014 - ။ Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်ယနေ့StreamScope® MT-50 HDT, ကုမ္ပဏီအသစ် Real-time DTV သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း tool ကို, NewBay မီဒီယာကနေထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကိုလက်ခံရရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် အဆိုပါဆုပြိုင်ပွဲဂုဏ်ထူးတီဗီအစေခံရန် 2014 မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ထူးချွန်ထုတ်ကုန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယို, နှင့်ထုတ်လွှင့် / အွန်လိုင်းရေဒီယိုအသုံးပြုသူများသည်။ ဆုရရှိသူတစ်ဦးကရွေးချယ်ခဲ့ကြသည် ...